Vonjy Voina · Septambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Vonjy Voina · Septambra, 2017
Tantara mikasika ny Vonjy Voina tamin'ny Septambra, 2017
Karaiba26 Septambra 2017
Zimbaboe: Tsiaro Ny Murambatsvina
Afrika Mainty18 Septambra 2017
Ny 18 Mey 2005, nanomboka ny fandrodanana tanteraka izay heverina ho trano fonenana tsy ara-dalàna ny polisy tao Harare. Ankoatra ireo mpivarotra eny an-dalambe, eny fa na dia ireo izay mivarotra ara-dalàna aza dia nosamborina sy nampandoavina lamandy, ary nalaina ny entany sy ny fananany .
Azia Atsimo15 Septambra 2017
Shina12 Septambra 2017
Myanmar: Fihaonam-Bavaka sy Fanohanana avy amin'ny Firenena Manodidina
Tontosaina any amin'ny firenena manodidina ny fijoroana ho fanoherana sy ny fihaonam-bavaka ho fanohanana ireo Moanina ao Myanmar manao fihetsiketseham-panoherana. Ahitana sary sy lahatsary avy amin'ny firenena ao Azia Atsimo Atsinanana ity lahatsoratra ity.
Mianatra Mamboly Holatra Hivelomany ireo Siriana Any amin'ny Tanàna Iray Tratry Ny Fahirano
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana03 Septambra 2017
"Tiana ny hanaparitaka ity hevitra ity manerana izao tontolo izao mba ho fantatr'izy ireny ny fahombiazana azonay, hatramin'ny tolonay manohitra ny hanoanana sy ny fahirano"